“နှလုံးသားလက်ဆောင်” အပိုင်း(၆) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » “နှလုံးသားလက်ဆောင်” အပိုင်း(၆)
Posted by aung nainglin on May 26, 2012 in Copy/Paste |4comments
သူတို့ နှစ်ယောက်ကော်ဖီဆိုင်ထဲ ကိုရောက်တော့ ၀င်းထွန်းက အဆင်သင့် စောင့် နေလေသည်။ ချိန်းထားရင်တောင်လွဲနိုင်ပါသေးတယ်လေ။ ၀င်းထွန်းမသိသေးတဲ့ ကိစ္စဖြစ်နေတဲ့ အတွက် သူတို့ နှစ်ယောက်ကိုပြောတော့မည်ဆိုတာကြိုသိနေသည်။ ဘယ်တက်နိုင်ပါ့မလဲ ပြောတော့လဲပြောပေါ့။
“ငါတို့လာမယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုသိနေတာလဲ……….. ”
“သိတာပေါ့.မင်းဇော်ရယ် ဟဲဟဲ………….ကဲဘာသောက်မှာလဲ မှာလေကွာ …………”
ဆိုပြီး စားပွဲထိုးကောင်လေးကိုခေါ်ပြီး သုံးရောက်သားမှာလေသည်။ ကော်ဖီခွက်တွေ စားပွဲထိုးလေးက ခုံပေါ်သို့လာချပေးသွားပြီးနောက်မှာတော့ မင်းခန့် ရဲ့ ရောဂါက အစပြုချေပြီလေ။
“ဟေ့ကောင်……အတိတ်မေ့သလို ရွှေပျောက်သလိုလာမလုပ်နဲ့ နော်……..”
“နေကြပါအုံးကွာ…..မင်းတို့ နှစ်ယောက်က ဘာတွေပြောနေတာလဲ….ငါ့ ကိုလဲပြောပြပါအုံးကွာ…..”
“မင်းမသိပါဘူကွာ ၀င်းထွန်းရာ ကလေး က ကလေးလိုနေစမ်းပါကွာ…..လူကြီးတွေကြားလာမရှုပ်နဲ့ ……”
ဒီတစ်ခါတော့ မင်းခန့် ကို ၀င်းထွန်းလိုက်ထုပါတော့သည်။ မင်းခန့် လဲ ကော်ဖီဆိုင်ကို ပတ်ပြေးလေတော့သည်။ ခဏကြာတော့မှ နှစ်ယောက်သားပြန်လာလေသည်။ ပျှော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့သူတို့ သုံးရောက်ရဲ့ ဘ၀ထဲကို လင်းငယ် နဲ့ ရွှေရည် ဆိုတဲ့ ကောင်မလေး နှစ်ယောက်ဝင်လာခဲ့ သည်။ဒီလိုနဲ့ ………..
သူ ဖိနပ်ပြသာနာကို အစကနေ အဆုံးပြန်ပြီး ဒုတိယအကြိမ် ပြန်ပြောရလေသည်။ ပြောလို့ လဲပြီးရော မင်းခန့် က သူ့ ရဲ့လက်မောင်းကိုထိုးပါလေတော့သည်။
“ခွေးကောင်…….အဲ့ ဒါ ငါတို့ သိပြီးသာပဲဟာ…….မင်းက လူလည်ကြတာပေါ့လေ…….“
“ငါလဲ အဲ့ ဒါပဲသိတာလေ မနေ့ က တွေ့ တော့ မင်းလဲပါတာပဲ မင်းခန့် ရယ်……”
“သေလိုက်ပါတော့ကွာ ဒီတစ်ခါတော့ ငါခံလိုက်၇ပြီ………..”
“ကောင်းပြိ ဒါဆိုအခု ငါဖုန်းခေါ်လိုက်မယ် သူတို့ ကို ဒီကိုလာခိုင်းလိုက်မယ် ဘယ်လိုလဲ…..မင်းဇော်….”
“သူတို့ ကလာပါ့မလားကွာမင်းခန့် ရယ်………”
ပြောပြီးဖုန်းခေါ်ဖို့ ထွက်သွားလေသည်။ ကျန်ခဲ့ တဲ့ ဝင်းထွန်းက သူ့ ကိုမေးခွန်းတွေ ဆက်တိုက်မေးပါတော့သည်။ သူကလဲ ဖိနပ်ပြသာနထဲက ကောင်မလေးအကြောင်းကို ပြောပြလိုက်လေသည်။ ၀င်းထွန်းကိုပြောပြီး အဆုံးမှာတော့ မင်းခန့် ပြန်ရောက်လာလေသည်။
“မင်းက ဘယ်ကပြန်လာတာလဲ ”
“ဟ ဖုန်းသွားဆက်တာလေကွာ….ဘာဖြစ်လို့ လဲ မင်ဇော်.”
“မင်းဖုန်းက ဘယ်ရောက်သွားလို့ လဲ…….”
“အိမ်မှာ ကျန်ခဲ့ တယ် အဲ့ ဒါကြောင့်လမ်းဘေးက ဖုန်မှာသွားဆက်တာ……”
“ဒါနဲ့ နေပါအုံးကွ သူတို့ဖုန်းနံပါတ်ကို ဘယ်တုန်းက ရတာလဲ…..”
“မနေ့ က ရုပ်ရှင်ရုံထဲက ပြန်ထွက်လာတော့ ရွှေရည့် နားကပ်ပြီးတောင်းလိုက်တာ……ဟဲဟဲ…….”
“မင်းဖုန်းဆက်တော့ ဘာပြောလဲ ”
“သူတို့လှည်းတန်းရောက်နေတယ်တဲ့လှည့် ဝင်ခဲ့ မယ်တဲ့ ……..ကဲ မောင်မင်းကြီးသား ဘာသိချင်သေးလဲပြော………..”
ပြောင်စက်စက်မျက်နှာပေးနဲ့ပြောနေတဲ့မင်းခန့် ကို အပြစ်မဆိုချင်တော့ပါ။ ဘာ့ ကြောင့် လဲဆိုတော့ သူ အလှည့် ရောက်နေပြိဆိုတာ သူသိလိုက်လို့ ပဲလေ။ ခဏကြာတော့ရွှေရည်တို့ ရောက်လာကြသည်။
“ဘာကိစ္စရယ်လို့ တော့မဟုတ်ပါဘူးကွာ….ဒီကောင်ကြိး မင်းဇော်က လင်းငယ်ကိုတွေ့ ချင်လို့ တဲ့ လေ……”
မထင်မှတ်ထားတဲ့ ကိစ္စကြောင့်သေချင်သလိုဖြစ်သွားတာ မင်းဇော်ရယ်ပါ။ သူ့ ကိုသူသိလိုက်ပြီလေ။ ဘယ်တက်နိုင်ပါ့မလဲ ချော်လဲရောထိုင်လုပ်ရတော့သည်။ စိတ်ထမြှာတော့ မင်းခန့် ကို ကျိန်ဆဲမိနေသည်။
“အစ်ကိုက လင်းငယ်ကိုတွေ့ ချင်တာ ဘာကိစ္စရှိလို့ လဲဟင်……….”
သူပြောလိုက်မှပိုဆိုးသွားပြီဆိုတာ သိလိုက်ပြီလေ။ သေလိုက်ပါတော့မင်းဇော်ရယ် မှားပြိးရင်းမှားလိုက်ပြန်ပြီလို့သူ့ ကိုယ်သူစိတ်ထဲက အပြစ်တင်နေမိသည်။
“အဲ့ ဒီလိုလဲမဟုတ်ပါဘူးကွာ……..ရွှေရည့် ကိုလဲသတိရပါတယ် နှစ်ယောက်စလုံးကိုပေါ့……..”
“ရွှေရည်တို့ ဘာသောက်မလဲ မှာလေ အအေးသောက်မလား…….”
သူငယ်ချင်းအသစ်တွေနဲ့သူတို့ ငါးယောက်ရဲ့ရင်ထဲမှာ အပျှော်တွေစီးဆင်းနေပြီလေ။ မင်းဇော်ထွန်းကတော့ လှပတဲ့ မျက်နှာလေးကိုပဲ မလွှတ်တန်းငေးကြည့် နေမိတော့သည်။ ရှေ့ ရှောက်ဘာတွေဆက်ဖြစ်အုံးမလဲကောင်မလေးရယ်။……………………………………………………..
“ဟဲ့လင်းငယ် အစ်ကိုဇော်မင်းထွန်းက နင့် ကိုစိတ်ဝင်စားနေပြီဆိုတာသေချာနေပြီနော်………..သူဖွင့် ပြောလာရင်နင်ဘယ်လိုဖြေမလဲ…”
“ချစ်တယ်လို့ဖြေလိုက်မှာပေါ့……”
“ဟဲ့နင့် ဟာက မလွယ်လွန်းဘူးလားဟာ………..နင့် ကိုနင် မိန်ကလေးဆိုတာကိုလဲ သတိထားပါအုံးဟာ ………….”
သူငယ်ချင်းက စိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ ပြောတာကို သူအပြစ်မယူပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ သူကိုယ်တိုင်က အချစ်က ဘာလဲဆိုတာတောင်မသိသေးပါဘူး…..အဲ့ ဒါကြောင့်သူစမ်းသက်ချင်တယ်လေ။……………………………
ဒီလိုနဲ့တစ်နေ့ တော့ မင်းဇော်ရင်ထဲမှာ ဘယ်လိုမှမျိုသိပ်ထားနိုင်စွမ်းမရှိတော့တာကြောင့်ဖွင့် ပြောလေတော့သည်။
“လင်းငယ်…………ကိုမင်းကို ပြောစရှိတယ် ……”
“ပြောလေအစ်ကိုရယ် သူစိမ်းတွေမှမဟုတ်တာ ”
“စိတ်ဆိုးသွားတာလား လင်းငယ်ရယ်……..ကိုဘယ်လိုမှ မျိုသ်ိပ်မထားနိုင်လို့ ပါကွာ……ကို့ ကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့ ကွာ……ကို့ ကို မမုန်းလိုက်ပါနဲ့ ကွာ….နော်…..”
“အစ်ကိုရယ်…….လင်းငယ်ရဲ့ ရင်ထဲမှာ အစ်ကိုက ရှိပြီးသားပါ…….”
“ဟာ….လင်းငယ် ကို့ ကို ဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲဟင်……..ကို့ အချစ်ကိုလက်ခံတယ်ပေါ့နော်…….”
“ဒါပဲနော် ကို ………………… လင်းငယ်က လွဲပြီး ဘယ် သူ့ ကိုမှမချစ်ရဘူးနော်…”
“စိတ်ချပါကွာ ကို လင်းကလွဲပြီး ဘယ့် သူ့ ကိုမှစိတ်မ၀င်စားပါဘူး………….ကိုသစ္စာဆိုရဲ့ ပါတယ်…………..”
နောက်တစ်နေ့ ရောက်တော့ သူငယ်ချင်းတွေကိုကြွားရန် ကော်ဖီဆိုင်သို့ထွက်လာခဲ့ လေသည်။………………….။…………………..
ရှေ့ သို့ ဆကိပါအုံးမည်။
သူငယ်ချင်း windtalker ရေ
ဆယ်ပုလင်းမဟုတ်ဘူးဗျ ……ပုလင်းကသေးလို့ လေ…. ဆယ်ပုံးကိုရှင်းရတာ
မုဒိတာ မပွားနဲ့ အုံးဗျ….ဇာတ်လမ်းလေးဆုံးရင် လျို့ ဝှက်ချက်ကိုပြောပြပါ့မယ်ဂျာ…….
ဘာ့ ကြောင့် လဲဆိုတာကိုပေါ့……ဟဲဟဲ
ကျွန်တော်က ရသ ပေါ်လွင်အောင်မရေးတက်လို့ ပါ….
အစ်ကို ဗိုက်ကလေး ကျန်းမာပါစေနော်